प्रेममा धोका किन हुन्छ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः माघ २३, २०७३ - साप्ताहिक
प्रेम हो भने धोका हँुदैन । धोका भयो भने त्यो प्रेम थिएन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
दुवै अरूतिर निर्भर भएर । आफूमा विश्वास पनि हुनु जरुरी छ ।
अपरिपक्वताका कारण हो कि ?
विश्वास नभएर ।
यो प्रकृतिको नियम हो ।
एक–अर्काप्रति विश्वास भएन भने धोका हुन्छ ।
विश्वासको कमी तथा बोली, व्यवहारका कारणले प्रेममा धोका हुन्छ ।
अविश्वासका कारणले यस्तो हुन्छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थ र धनसम्पत्तिका कारणले ।
प्रेममा धोका हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहँुदै किन प्रेम गर्नुपर्‍यो ?
माया–प्रेममा धोका हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मुन्छे मुया लाउने चक्करमै हुन्छ, किन ?
प्रेम हो भने धोका हुँदैन । धोका भयो भने त्यो प्रेम होइन, जाल मात्र हो ।
धोकाबिना त प्रेम नै हुँदैन नि ।
प्रेममा धोका हुँदैन । धोका हुनासाथ त्यो प्रेम रहँदैन ।
मिलनपछि बिछोड हुन ।
प्रेममा धोका हँुदैन । जहाँ धोका हुन्छ, त्यसलाई प्रेम भनिँदैन ।
धोका त मान्छेले पो दिन्छन् । प्रेम आफैंले धोका दिने होइन ।
धोका छ र त प्रेम छ । सबै प्रेम सफल मात्र हँुदा हुन् त संसारमा प्रेम प्रेम नै हँुदैनथ्यो ।
प्रेमलाई नबुझ्दाको परिणाम ।
चाहिनेभन्दा बढी विश्वास गर्दा ।
माया नपचेर धोका हुन्छ ।
दुनियाँको चलन नै यस्तै छ । धेरै माया दियो भने धोका हुँदो रहेछ ।
आपसी असमझदारी बढेपछि धोकाको खेल सुरु हुन्छ ।
जब दुई व्यक्ति सम्पर्कबाट टाढा हुन्छन्, तब उनीहरूको दूरी बढ्दै जान्छ । त्यसपछि एक–अर्कालाई धोका दिनै पर्दैन ।
इँटाजत्रो मोबाइल, राँगोजत्रो बाइक तथा अक्सफोर्ड डिक्सनरीजत्रो पर्स नभएर ।
धोका नखाएको मानिसले प्रेमलाई बुझ्न सक्दैन । प्रेमलाई सही तरिकाले बुझ्न प्रेममा धोका हुनुपर्छ अनि कसैको चाहिँ धोकामा पनि प्रेम नै हुन्छ । एकपटक धोकालाई पनि प्रेम गर्नुस अनि प्रेममा धोकाको महत्व थाहा पाउनुहोस् ।
इच्छा–आकांक्षा बढी भएर होला ।
अपेक्षा बढी भएर ।
लेखान्तमै नभएर ।
प्रेमको गलत परिभाषा गर्ने युवापुस्ताको आचरणका कारणले ।
मधुमेह हुन्छ भनेर हो कि ?
आजकाल प्रेम गरिन्छ र गराइन्छ । समयक्रमसँगै विचार र क्रियाकलापहरू बदलिँदै जान्छन् । समयसँगै पहिलेको जस्तो धारणा र सम्पर्कमा कमी आउँदै जान्छ ।
अचेलका केटीहरू कत्तिको केटा जिस्क्याउँछन् ? वैशाख २३, २०७५
अचेलका केटीहरू कत्तिको केटा जिस्क्याउँछन् ? वैशाख १९, २०७५
नेपाली कांग्रेसले अब के गर्नुपर्ला ? वैशाख ९, २०७५